हार्दिक बधाई ! धनुषाका दुई नेपाली वैज्ञानिक ईन्जिनियर अमेरिकामा उच्च वैज्ञानिक पुरस्कारले सम्मानित…हेर्नुहोस् । – yuwa Awaj
धनुषाका दुई नेपाली वैज्ञानिक ईन्जिनियर अमेरिकामा उच्च वैज्ञानिक पुरस्कारले सम्मानित भएका छन् । नाशामा कार्यरत जनकपुरकी वैज्ञानिक ईन्जिनियर डा. रश्मी साह नासाद्धारा
अर्लि करिअर पब्लिक अचिभमेन्ट पुरस्कार २०१९ बाट सम्मानित भएकी छिन् । यस्तै अमेरिकाको ईन्टेल कम्पनीमा कार्यरत जनकपुका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता वैज्ञानिक ईन्जिनियर डा.सतिशचन्द्र झा ईनटेल कम्पन्ीको सर्वोच्च अविष्कारक पुरस्कार २०१९ बाट सम्मानित भएका हुन् । टुडेपाटी
बेलायत र चीनमा अहिले एउटा भिडिओ भाइरल भएको छ। उक्त भिडिओमा चिप्लिएर नदीमा डु’बेकी एक जना युवतीलाई जोगाउन एक जना पुरूष नदीमा हाम फालेका छन्। घ’टना गत शनिबारको हो। दक्षिण पश्चिम चीनको चोङछिङ सहरको नदीमा मानिसहरू घुमघाम गरिरहेका थिए।
त्यही क्रममा एक जना २४ वर्षीया युवती ढुंगामा चि’प्लिएर नदीमा ख’सिन्। उनी खसेको भन्दा अलिकति तल सानो पुल छ। उनी डुबेर त्यही पुलभन्दा तल पुगिन्। त्यतिञ्जेल उनलाई बचाउन कोही तयार भएनन्। केहीबेरमा एक जना पुरूषले जुत्ता फुकाले र नदीमा हाम फाले।
ती ६२ वर्षीय पुरुष चिनियाँ नागरिक थिएनन्। उनी त चोङछिङका लागि बेलायती महावाणिज्यदूत स्टेफन एलिसन थिए। एलिसनले पौडेर ती युवतीलाई समाते। अनि कसैले फालेको रातो बेल्टको सहाराले उनलाई नदीबाट बाहिर निकाले। त्यतिञ्जेल उनलाई अरूलाई पनि सहयोग गरेका थिए।
एलिसनले आफ्नै ज्यानलाई जो’खिममा राखेर गरेको यो उ’द्धारको त्यहाँ उपस्थितले भिडिओ खिचेका थिए। अहिले त्यही भिडिओ दुबै देशका सामाजिक स’ञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ। चिनियाँहरूले बेलायती कूटनी’तिज्ञको उक्त साहसिक र मानवीय कामको तारिफ गरेका छन्। लन्डन र बेइजिङस्थित दुबै देशका कूटनीतिक नियोगले एलिसनलाई धन्यवाद दिएका छन्।
बेलायत स्थित चिनियाँ राजदूत लिउ सियाओमिङले भनेका छन्- चोङछिङका लागि बेलायती महावा’णिज्यदूत स्टेफन एलिसनलाई सलाम छ!
उनको नाम चोङछिङमा मात्र होइन पुरै चीनभरि सम्झिइनेछ। उनको बहादुरी र दयालुपनबारे लामो समयसम्म चीन-बेलायत मित्रतामा उद्ध’रण गरिनेछ।
एलिसनले उ’द्धार गरेकी युवती अहिले निको भइरहेकी छन्। ती युवतीले एलिसनलाई धन्यवाद दिँदै अर्को साता आफ्नो घरमा खानाका लागि निम्तो दिएको बेलायती पत्रिका द गार्डियनले उल्लेख गरेको छ। बेइजिङले हङकङमा राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन लगाएपछि र बेलायतमा चिनियाँ टेलिकम्यु’निकेसन कम्पनी हुवावेलाई फाइभ जी सेवामा प्रतिबन्ध गरिएपछि बेलायत-चीन सम्बन्ध चिसिएको छ।
Prevज्वाला सङ्ग्रौला र रबि लामिछानेको देशभक्त युवालाई एकजुट हुन आ’ह्वान…हेर्नुहोस् ।
Nextओलीलाई हटाउनैपर्छ पार्टीले लिखित आ’राेप लगाइसकेकाे छ – बाबुराम भट्टराई !